Si aad 10 Faransiis Composers iyo Music caanka Qadiimiga ah
Qaar badan oo ka mid ah ay walxuhu muusikada oo qarnigii 20-aad waxaa la soo Guuriyay ahayn ee composers Faransiis caan ah oo ay classical music . Inkasta oo qarniyo soo saaray ka hor fannaaniin casriga ah ayaa weli ku jira cabsadeen badan shuqulladooda. Qadar ah ammaan iyo abaalmarino No saamaynta weyn oo ka mid ah composers Faransiis samayn lahaa caddaaladda. Marka la eego hoos ku qoran yihiin toban ka mid ah composers Faransiis ugu caansan oo ay caan music classical. Qaybaha ay yihiin ballaaran oo kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay kaliya bixinaysaa warbixin guud oo hordhac ah oo kooban si ay naftooda iyo walxuhu muusikada kala duwan.
1) Yuusuf-Maurice Ravel:
Ravel waxa uu ku dhashay 1875 magaalada Basque ee Ciboure, France. Wuxuu ahaa laxamiistaha, biyaaniiste iyo kaari ah inta badan la xidhiidha impressionism. Ravel siiyey qaab dadweynaha ugu horeysay ee da'da 14 jir uu dhameystiran shuqullada ka dhigan in shan iyo siddeetan. Ravel diiday dhan sharaf gobolka iyo honneur Legion d'laakiin PHD sharaf ka jeediyey Jaamacadda la Oxford. Waxa uu ku dhintay 1937 oo waxaa lagu aasay socda waalid ee Levallois-Perret. Shuqulladiisii ​​ugu caansan waa kuwan soo socda:
Oo dawan ayaa godan
Joan ee Arc
Ilmuhu iyo sortileges
Wuxuu ku dhashay 1908 laxamiistaha iyo organist sidoo kale wuxuu ahaa ornithologist ah oo seefqaad uu Roman galaya xabbadood uu. Messiaen bilaabay halabuurka da'da ah goor hore oo uu u saftay guud ee 1931 iyadoo uu Suite orchestral. Shuqulladiisa oo ka tarjumaya fiqiga madaxfurashada rabaani ah oo element sheeko cirfiid ee Shakespeare. Messiaen waxaa inta badan sida laga soo xigtay in uu ku arkay midabada music. Waxa uu sidoo kale daawan jiray heesaha shimbiraha oo lagu daro badan shuqulladiisa. Waxaa ka mid ah uu muusikada badan oo ka shaqeeya kuwa ugu fiican yihiin soo socda.
Le darabtay Celeste
The oubliees qurbaanno
Qabriga waari ayaa
Walxuhu muusikada Faure ayaa saamayn badan oo uu contemporaries. Wuxuu ku dhashay 1845 ee qoyska ka mid ah cultured this laxamiistaha Faransiiska marnaba waqti ku filan oo ay ka koobanahay oo lahaa u Dumayn baadiyaha in ka dib sano in la sameeyo isugu darey. Waxa uu xirfadiisa halabuurka qaaday jeedo ah da'da 31 oo leh qaab sonata rabaab hore. In 1908 uu lagu casuumay si ay u qabtaan ee Buckingham Palace in albaabada u furay badan. Beethoven sameeyey sifayn ee afartii xarig uu dhameystirtay laba bilood ka hor caan ku dhintay uu. Waxa uu wanaagsan ee loo yaqaan waayo, shuqullada soo socda.
Shan eeg barakiciyay
Waxaa loo tixgeliyaa in ay theorist ah music ugu muhiimsan ee uu ka qabno Rameau oo ku dhashay 1683 wuxuu ahaa nin aad qarsoodi ah. Waxa uu baray music ka hor inta uusan wax qorin waxna akhrin. Daabacaadan ee khuseeya ee wada noolaanshaha 1722 ahayd sheegashadiisa ugu horeeyay ee warkiisiina wuxuu gaadhay. At 50 jir uu bilaabayay inuu xirfadiisa ciyaareed operatic oo waxaa ugu danbeyn laga sameeyey muusikiiste maxkamadda rasmi ah ka, halkaas oo uu barbaro hawlgabka boqornimo. Dhowr bilood ka hor inta uusan dhiman waxa kale oo uu la sameeyey geesiyad ah oo ka mid ah ordre de Saint-Michel. Uu go'antahay operas iska cad in Classics soo socda.
Ayaa xiray geesiyaasha
Castor taasoo sumaddeedii
An lala yaabo ay dabiicadda Satie ahaa laxamiistaha iyo biyaaniiste oo naftiisa ku faanaan ku saabsan la yaqaan 'phonometrician'. Wuxuu ku dhashay 1866 ee Normandy qoyskiisa u dhaqaaqay Paris markii uu ahaa afar jir. Waxaa uu qirtay inuu Conservatoire Paris oo la tilmaamey 'ardayga laziest in Conservatoire ah'. Satie mustaqbalkiisa ciyaareed ee 1892 ku bilowday uu ka kooban hore. Walxuhu soo dhaafay Satie ee waxay ahaayeen laba 1924 ballets. Wuxuu ku geeriyooday 1925 ee cirrhosis beerka oo uu keeno sabab u sano ee la cabbo oo culus. Waxa uu gaadhin guusha uu soo socda ay walxuhu muusikada.
Labawejiile yahow qasiidooyinka
Waxaa ka mid ah composers ugu saameynta badan ee qarnigii 20-aad magacaaga Debussy ayaa si cad kasoo muuqday. Waxa uu ku dhashay 1862 ee Saint-Germain-en-Laye. By 1890 wuxuu bilaabay inuu horumariyo kartina muusikada u gaar ah markii uu maqlay music gamelan Jafaaniis. Waxa uu sidoo kale bilaabay mashaariic dhowr ah opera lakiin caafimaadkiisa isaga la taaban karo ku fashilmay iyo kuwa badan oo iyaga ka mid ah ayaa ka hadhay taalo. On 22 August 2013 guurada ee dhalashadiisa Google ka go'an ah oo loogu dabaal Google Doodle. Debussy ayaa lagu yaqaanaa soo socda xagga shuqullada muusikada uu Impressionist.
Qaybta Hard ayaa
ODE Symphonic Zuleima
Lacagta ugu badan ee Berlioz dunida muusikada ahaa uu khuseeya on Instrumentation. Waxa uu ku dhashay sanadkii 1803, wuxuu ahaa laxamiistaha ah Romantic bartay wada noolaanshaha ka buugaagta oo keliya. Berlioz bilaabay halabuurka markii uu maqlay laba operas by Gaspare Spontini kii uu hayo a saaxiibtinimo muddo dheer. Waxa ay ahayd inta u dhaxaysa 1830 iyo 1847 uu ku qoray shuqulladiisa ugu caansan oo abaal marinin waxaad ka mid yihiin 50 songs in dheeraad ah nasjonalromantiske horumariyo. Wuxuu ku geeriyooday 1869 ka dib markii qaar ka mid ah halabuurka xabbadood classic music ah sida soo socda.
Romeo iyo Juliet
Ugu noqon lahaa nolol
Laxamiistaha A, organist, kaari iyo biyaaniiste, Saint-Saens waxa uu ku dhashay 1835 oo uu u saftay isagoo jira da'da toban. In 1848 uu qirtay in Conservatoire Paris markii uu si buuxda ugu codeeyay abaalmarinta ugu horeysay ee tartan abaabulay GULKOODA Sainte-Cecile. In 1868, wuxuu ugu shuqulkiisa hore orchestral oo noqday caan ah oo adduunka ah muusikada. In 1913 wuxuu siiyey uu ku macsalaameynayo riwaayad ee Paris oo u safray guud ahaan Atlantic aruuriyo lacag hay'adaha samafalka dagaalka. Waxa uu ka tagay inay soo socda ay walxuhu muusikada.
Hordhac iyo Rondo Capriccioso
Concerto Piano Labaad
First halaabaan Concerto
Walxuhu Poulenc ayaa waxaa ka mid ah eeg, shuqullada piano Solo, qolkii music, operas, xabbadood qasiidooyinka, ballets, iyo music riwaayad orchestral. Waxa uu ahaa laxamiistaha iyo biyaaniiste oo ku dhashay 1899. koray, Poulenc yimid xiriir la composers badan muusikada oo si weyn u saameeyay mustaqbalkiisa ciyaareed. Waxa uu saftay kulankiisii ​​ugu horeeyay sanadkii 1917 iyadoo uu Rapsodie negre gabal shan dhaqdhaqaaqa kooxda uu kufiicanyahay samaynta iyo qol. Poulenc u beddelay si ay opera ee sano uu ugu dambaysta. Qaar ka mid ah shuqulladiisa ugu muhiimsan waxaa lagu soo socda.
The laabta Tiresias
Wada of Carmelites ah
Humaine La Voix
Saddex mooshin Joogta
Abwaan A Dr Makumbe iyo laxamiistaha ku dhashay 1300 Machaut inta badan la socday King John safarada uu Yurub. Oo uu wax soo saarka lyric ka kooban yahay ku dhawaad ​​400 oo gabayo, cilmaani music in la macaamilooday kuwii jacaylka courtly iyo music xurmada leh oo ka kooban meel wareegga uu of Mass. Isagu wuxuu isu isticmaalaa sida uu yahay qof lyrical in badan oo ka mid ah gabayada uu. Machaut inta badan ka kooban oo uu cilmaani music shan qaybaha: Lai ah, virelai ah, motet ah, ballade ah, iyo rondeau. Hoos waxaa ku darey uu ugu caansan.
Amours ma ahan cadaalad
Qosloba noocan oo kale ah ee gacanta
Daacad, dhibic u dhac in
In kasta oo ku dhashay Italy ee 1632 Lully, a laxamiistaha, instrumentalist iyo qoob ka disavowed wax saameyn Talyaani in uu music. Koraaya ayuu kor u bartay inuu u ciyaaro ee gitaar iyo rabaab iyo sidoo kale uu gashan jirin sida Harlequin inta lagu jiro Mardi GRAS. Lully ee music lagu yaqaan awood ay, liveliness oo qoto dheer dabeecad shucuureed oo soo saaray kacaan xagjirka ah ee maxkamadda. Operas waxaa lagu tilmaamay "dhibaatooyinka music". Lully ka gangrene in cudurka uu maskaxda ku dhintay. Naftiisa mustaqbalkiisa muusikada firfircoon soo saaray soo socda xabbadood muusikada.
Cadmus iyo Hermoine
Alcest ama Triumph ee Alcide
The masterpieces muusikada oo ka composers weyn Faransiiska ah waxaa lagu yaqaan ee qoto dheer iyo qaaraan la taaban karo laga sameeyey oo duurka ku muusikada. Waxa ay si siman uga baqi u ka kooban dareenka iyo style caan ah suugaanta. The composers kor ku xusan Faransiis kaddeedka abuuray kasta oo ay masterpieces kuwaas oo qaar ka mid ah ayaa waxa uu qiray in, darjada. Qaar ka mid ah waxay ahaayeen protégées iyo ardayda ee composers kale oo waa weyn kuwaas oo u yimid ka hor. Si ka duwan composers music ee sannadihii la soo dhaafay ka commercialism ma ahaa sida baahsan ee xilligii Baroque. Sidaa badan oo iyaga ka mid ah u dhinteen paupers.
> Resource > Music > 10 Faransiis Composers oo ay Music Qadiimiga ah oo caan ku